एक घर एक तरुण बनाउँछु:अशोककुमार झा - Sagarmatha Online News Portal
एक घर एक तरुण बनाउँछु:अशोककुमार झा
विक्रम संवत २०३४ साल फागुन २५ गते सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाविसको वडा नं. १ चखडा गाउँमा जन्मिएका अशोककुमार झा कक्षा ६ मा पढ्दादेखिनै नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेका थिए । वि.सं. २०४६ सालबाट राजनीतिमा होमिएका झाले नेपाल विद्यार्थी संघ महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको ईकाइ अध्यक्षबाट राजनीति शुरु गरेका थिए । झाले विद्यार्थी राजनीतिमै लामो समय बिताए । वि.सं. २०५१÷५२ सालमा शंकरदेव क्याम्पसमा समेत झाले नेविसंघको सक्रिय राजनीति गरे । विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदानै उनले सोलुखुम्बु जिल्लामा भएको मध्यावधी र संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको खम्बा भएर पार्टीको प्रचारप्रसारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे । वि.सं. २०७३ जेठ २३ गते भएको नेपाल तरुणदल सोलुखुम्बुको अधिवेशनबाट झा सर्वसम्मत रुपमा ३ वर्षको लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । ३ वर्षको कार्यकालमा झाले कस्तो योजना र राजनैति सहकार्यका साथ आएका छन् त ? यसैको सेरोफेरोमा रहेर सगरमाथा अनलाईनका प्रधान सम्पादक बुद्धवीर बाहिङले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
अबको तरुणदल सोलुखुम्बुलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
मुख्यत तरुण भनेको युवा हो । १८ वर्षदेखि ४५ वर्ष मुनिका युवाहरु यस तरुण दलमा आबद्ध हुन्छन् । तरुणहरुको प्रमुख मुद्धा भनेको रोजगार, व्यवसाय र प्रशिक्षण हो । आपूm सक्षम भएर गाउँगाउँमा भएका युवाहरुलाई सक्षम बनाउनको निम्ति लागि पर्छ र अगाडि बढ्छ । त्यसका निम्ति चाहिने प्रशिक्षण, रोजगार, व्यवसायमुखि कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि उत्साहित गर्ने तथा तरुणहरुको हरेक किसिमको मागसँग तरुणहरुलाई विस्तारित गर्नको लागि मैले सर्वसम्मत नेतृत्व लिएको कारणले हर किसिमको प्रयत्न गरेर सोलुखुम्बुको तरुणहरुलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हर प्रयत्न गर्दछु ।
पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको प्रमुख भातृ संगठनको रुपमा रहेको नेपाल तरुण दल सोलुखुम्बुको अध्यक्षमा कसरी सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभयो ?
खासगरी हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्लामा तरुणहरु गाउँ ईकाई सभापति सहित ५ जनाका दरले ३४ वटै गाविसबाट प्रतिनिधी आउनु भयो । ती आएका प्रतिनिधीहरुले सोलुखुम्बु जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था तरुणदल हो भनेर चिनाउनका निम्ति र काम गर्ने एउटै व्यक्ति अशोककुमार झा नै हो । जसले सोलुका युवाहरुलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ र गरेको छ । साथै आगामि दिनमा पनि गर्ने छ भनेर समग्र तरुणहरुले बुझ्नु भयो र नेतृत्वले पनि तरुणहरुलाई डो¥याउनको निम्ति सही मार्ग प्रशस्त गर्नको निम्ति उत्तम व्यत्ति अशोककुमार झा नै हो भन्ने कुरो बुझिदिनु भयो । त्यसपछि म सर्वसम्मत नेपाल तरुणदलको अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई मजबुत र सक्रिय बनाउनको लागि अब तपाईको पहल के हुन्छ ?
हामीले सोचेको जस्तो तरुणहरुलाई सोलुखुम्बुमा संगठन सक्रिय गर्न सकेका छैनौं । त्यसमा हाम्रो केहि कमजोरी भएको छ । म त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्छु । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि म नेपाल तरुणदलको कार्यबाहक अध्यक्ष भए । निर्वाचनमा लागि पर्दा पार्टीका केहि चुनौतीहरु थिए । तीनिहरुलाई सामना गर्ने क्रममा तरुणदलको संगठन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने थियो त्यसमा केहि कमजोरी भएकै हो । अब हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात हरेका गाउँ÷गाउँका ईकाईका तरुण समितिहरुलाई पूर्णता दिनेछु । त्यसको साथै वडा समितिमा समेत एक घर एक तरुण बनाउनको लागि म नौ वटै ईलाकामा तरुण नेताहरु लिएर जानेछु । र तरुणदलको ईकाई समितिलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने छु । आइपरेको समस्यासँग सामना गर्नको निम्ति नेतृत्व गर्दै वडातहदेखि गाविस स्तरसम्म ल्याउनको लागि अगाडि बढ्ने छु । र त्यो तरुणले आज होइन १० वर्षपछि आज जो तरुण नेताहरु गाउँ/गाउँ र वडाबाट आउनुहुन्छ ती नेताहरुले जिल्ला र केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको बनाउने मेरो पहिलो पहल हुनेछ ।
तपाईको कार्यकालभित्र सोलुखुम्बु जिल्लामा तरुणदललाई अझ मजबुत र सशक्त बनाउनको लागि कस्तो योजना अगाडि सार्नुहुन्छ ?
तरुणदल सोलुखुम्बुमा १८ देखि ४५ वर्षभित्रको युवाहरुको नेतृत्व गर्नको लागि मलाई सर्वसम्मत रुपमा सोलुखुम्बुका आम तरुणहरुले विस्वास गरेका छन् । त्यसैको भरमा युवा साथीहरु, तरुण मित्रहरु, नेपाल तरुणदलमा आबद्ध हुनेछन् । त्यसका निम्ति हामीले विभिन्न किसिमका योजनाहरु बनाएका छौं । कतिपय युवाहरु शिक्षित भएर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ, वहाँहरुलाई रोजगार चाहिएको छ । कसैलाई शिक्षा क्षेत्रमा चाहिएको छ । कसैलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिएको छ । कसैलाई हाइड्रोदेखि विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार चाहिएको छ । त्यो रोजगारको क्षेत्रमा लगाउनको निम्ति मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गर्दै आएको छु र भोलीको दिनमा पनि गर्नेछु । आज मुलुकमा र जिल्लामा काम नभएको कारणले गर्दा विदेशमा पलायन हुनु पर्ने अवस्था छ । किनभने विहान, बेलुकीको लागि गाँस, बास र कपासको कठिनाई भएको कारणले हाम्रो नेपालमा सम्भावित सम्भावनाहरु नदेखेकै कारणले दिनानुदिन पासपोर्ट बनाएर विदेशिने क्रम छ । त्यो क्रमलाई रोक्नको निम्ति जुन युवासँग जे सक्षमता छ, कसैले चाँही सिप मूलक तालिमको व्यवस्था गरेर रोजगार दिने । कृषि सम्बन्धी रोजगारको व्यवसायीको लागि अथवा अन्य व्यवसाय गर्ने युवाहरुलाई सरकारले दिने विभिन्न अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराएर साथै ती युवाहरुलाई सक्षम बनाउनका लागि विभिन्न किसिमको तालिमहरु दिएर, युवाहरुलाई हाम्रो संगठनप्रति आबद्ध गराएर, जुन युवाहरु जो की अधिकांशले चाही रोजगार भएर काम गरेर, घरमै बसेर समाजसेवा गरेको देख्ने छन् । र आउने पुस्ताको समेत तरुणदलमा चाही आकर्षण बढ्ने छ । यी र यस्तै किसिमका योजनाहरु आउने दिनमा वडादेखि गाविसहुँदै जिल्ला तहसम्म लिएर जाने सोचमा छु ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको समग्र विकासको लागि र अन्य राजनैतिक दलको युवा नेताहरुसँगको सहकार्य अबको दिनमा कस्तो हुन्छ ?
मैले भन्ने गरेको छु, युवाहरु जबजब यो मूलुकमा परिवर्तन गर्नका निम्ति हरेक राजनैतिक दलहरुले समाहित गर्न खोज्छन् । जबजब मूलुकलाई संकट आउछ । जबजब राजनैतिक दलहरुमा संकट आउछ तबतब मात्र युवाहरुलाई खोजी नै गरिन्छ राजनैतिक नेतृत्वहरुले तर त्यो होइन हामी युवा भनेको जबजब मूलुकमा संकट आयो तबतब मात्र होइन, यदि पार्टी चाही सही मार्गमा लागेन र राजनैतिकदलहरु चाही विकास तर्पm उन्मुख भएन भने त्यो तर्पm पनि सचेतना जगाउनको निम्ति हामी युवाहरु चाहे जुनसुकै राजनैतिक दलका भए पनि म नेपाली कांग्रेसको तरुणदल मात्र होइन, नेकपा एमालेका युथफोर्सदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको वाइसियलसम्म हरेक राजनैतिक दलका भातृ संस्थाहरुसँग गरेर उनीहरुको मञ्चमा पनि भन्ने गरेको छु, तपाईहरु युवाको नाममा कसैको दास नबन्नुस, युवाको हकहित र समग्र सोलुखुम्बुको विकासको निम्ति हामी जुनसुकै राजनैतिक दलको युवा हौं । तर हामी एक भएर अगाढि बढौं, यस्ता धेरै उदाहरणहरु मैले अरु राजनैतिक दलको भातृसंस्थाहरुको कार्यक्रममा गएर पनि बोल्ने गरेको छु । म तरुण दलको अध्यक्षको हैसियतले सोलुखुम्बुको जिविसको योजनाहरुमा मैले गरेका भूमिकाहरु र भैरहेका योजनाहरुमा जो अगाडि बढेका छैनन्, कार्यान्वयन भएका छैनन्, टेण्डर प्रक्रियामा गएको छ । टेण्डर लिएको छ, तर तोकिएको समयमा काम गरेको छैनन् । त्यस्ता योजनाहरुमा पनि समय अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति जिल्ला विकासदेखि विभिन्न निकायहरुमा हामीले गएर घेराउ गरेर यो काम कति समयमा हुन्छ ? र काम गरिरहेका कतिपय योजनाहरुमा विभिन्न किसिमका कठिनाइहरु भएका छन् । ती कठिनाईहरु फुकाउनको निम्ति हामी तरुणदलले अहम भूमिका खेलेका छौं । र अन्य भातृसंस्थाहरुलाई भन्ने गरेको छु, विकास र तरुणहरु अगाडि बढ्नको निम्ति आउने कार्यक्रमहरुमा अरु राजनैतिक दलका युवाहरुले भोलीका दिनमा साथ दिनु हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ ।
तपाईहरुको केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदै छ, तपाईको पनि केन्द्रीय पदाधीकारीमा दावी छ की ?
हाम्रो ५० जिल्लाभन्दा बढि जिल्लाहरुमा नेपाल तरुणदलको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भैसकेको छ । अरु कतिपय जिल्लाहरुमा हुने क्रममा छ । ती बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा अब केहि दिनभित्रमै हुनेछ । र जिल्लाको नेतृत्व हुने विरुवाको चिल्लो पात भन्छ । जस्तै जिल्लाबाट आएका नेतृत्वहरु सक्षम र कुशल भए भने ती नेतृत्वहरुले नै केन्द्रीय पदाधीकारीहरु पनि आपूm अनुकुल संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त गरेर चलाउनका निम्ति सक्षम नेतृत्व पंक्तिमा रहेका पदाधीकारी सक्षम र सबल चयन गर्नका निम्ति हाम्रो तरुणदलका जिल्ला अध्यक्ष तथा महाधिवेशन प्रतिनिधी, पार्सदहरु सक्षम हुनुहुन्छ । र त्यो सक्षमतालाई केन्द्रीय नेतृत्व चाही जसले चाही यो मुलुकमा नेतृत्वमा मुहान चाही राम्रो भयो भने चुहान पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । त्यो मुहान नेतृत्वमा चाही सक्षम नेतृत्व ल्याउनु पर्छ । र त्यो नेतृत्वले मात्रै जिल्लाका तरुणहरुलाई चलाउनको निम्ति कार्यक्रम दिएर विभिन्न किसिमको कार्यक्रम ल्याएर जिल्ला तहको नेताहरुलाई पनि अगाडि बढाएर संगठन अझ मजबुत बनाउनका निम्ति केन्द्रीय कार्यसमितिको अहम भूमिका हुन्छ । त्यो नेतृत्वमा पनि मैले हरेक जिल्लाका अध्यक्ष र महाधिवेशन प्रतिनिधी, पार्सद साथीहरुसँग भेटेर म सोलुखुम्बु जिल्लाको अध्यक्षको हैसियतले वहाँहरुसँग अनुरोध गरेको छु । र वहाँहरुले मूल्याङकन गरेमा अशोककुमार झाको पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा आवश्यकता छ भनेर महशुस गरेको खण्डमा म केन्द्रीय तहमा नेतृत्व सम्हाल्नको लागि तयारी छु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।
अन्त्यमा सोलुखुम्बु जिल्लाको तरुण युवा लगायत अन्य युवाहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
सोलुखुम्बु जिल्लाको तरुण युवा लगायत अथवा अन्य तरुण नेताहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी तरुण भनेको यो मूलुकको अमूल्य गहना हो । तरुणहरु हरेक किसिमले सक्षम र सबल हुन्छन् । चेतना भैसकेको र गर्न सक्ने खुबी, आँट, साहस भएको जमात नै युवा र तरुण हो । र तरुणहरु क्रोधमा नलागिकन समाजलाई कुमार्गबाट सुमार्गतिर ल्याउनको निम्ति भ्रष्ट्राचार मुक्त बनाउनका निम्ति, विकास गर्नका निम्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा जिल्लाको जुनसुकै विकास गर्नको निम्ति युवाहरुको अहम भूमिका हुन्छ । त्यस कारण तमाम युवाहरुलाई तरुण मित्रहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने आपैmले पहिचान गरेर सही सत्य के हो बुझि दिनुस अनिमात्र बढ्नुस । नेतृत्वले भन्यो भन्दैमा, आफ्नो मातृ पार्टीले भन्यो भन्दैमा गलत निर्णय नगर्नुस । समाजमा आएका विकृति र विसंगती विरुद्ध लड्नको निम्ति हामी तरुण युवाहरु जुनसुकै राजनैतिक दलमा आस्थावान हौं, हामी एक भएर अगाडि बढौं भन्ने आव्हान गर्न चाहान्छु ।
पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तय गरि,अगाडि बढेको छु : देवराज विश्वकर्मा,प्रमुख आयुक्त,राष्ट्रिय दलित आयोग
‘सरकार चरम भ्रष्टचारमा’ : रामकुमार शर्मा, नेता माओवादी